Ikhaya Lomhlala Phansi Nomphakathi Wabantu Abadala: Iphupho Logogo Nomkhulu
Ukuthatha umhlalaphansi ikhaya nomphakathi wabantu asebekhulile: Iphupho likagogo nomkhulu
Indawo ekahle yokubamba asebekhulile endaweni yokwamukela, enethezekile nenomoya wokungenisa izihambi
La Indawo Yokuhlala Yabantu Abadala Ogogo nomkhulu bayaphupha ikhaya lokuthatha umhlalaphansi phakathi Palermo enikeza imvelo yokwamukela kanye nezinsizakalo eziningi eziwusizo zokuhlala kwabadala. Setha ukunakekela Abantu abanamakhono e kukhutshaziwe, isebenzisa umsebenzi wabasebenzi abaqeqeshiwe nabaqinisekisiwe.
Indawo yokuhlala Yabantu Asebekhulile - Ikhaya lokuthatha umhlalaphansi nendawo yokuphumula ngosizo lwe-H24
Indawo Yokuhlala Yabantu Abadala e Ikhaya lokuthatha umhlalaphansi Kunikezelwa ukunakekelwa nokusizwa amahora angama-24 ngosuku asebekhulile, Ogogo nomkhulu bayaphupha itholakala ku- Palermo futhi unikeza kuzo zonke izivakashi zayo Amakamelo ane-air conditioner ne-TV futhi kumnandi Imisebenzi yokuzijabulisa. Inika indawo entofontofo nenomoya wokungenisa izihambi nabasebenzi abaqeqeshiwe kakhulu nge Isitifiketi Oss e I-OSA. Umoya wokungenisa izihambi owenziwa yilokhu Ikhaya lokuthatha umhlalaphansi kuyinto yokuhlala, nge Ukulala kwe-10 e Insiza yokuhlanza engezwa kuyo yonke eminye imisebenzi nokunethezeka kwesakhiwo. Lapho Indawo yokuhlala Yomphakathi ibonakala ngokweqisa cura e inhlanzeko futhi lungasetshenziswa yi abantu abakhubazekile.
Indawo yokuhlala neyomhlalaphansi efanelekile ukunakekela iziguli ezinenkinga yokuwohloka komqondo nezinye izifo ezithambile
La Indawo Yokuhlala Yabantu Abadala yemukela izivakashi zayo ngokunikeza imvelo efudumele futhi ejwayelekile, lapho nabasebenzi bezonakekela iziguli nazo Ukuwohloka komqondo kukaSenile noma ezinye izifo ezijwayelekile zesikhathi sesithathu. Phakathi kwemisebenzi eminingi kanye nemisebenzi enikezwa yi Indawo yokuhlala yabantu asebekhulile uzothola Usizo Lokwelashwa, ngamathuba okuba IGeriatrician, physiotherapist, Isazi sezengqondo nezinye izibalo ezikhethekile. Kubhekelwa kakhulu ukunakekelwa nokuhlanzeka kwezivakashi, ikakhulukazi abantu abangazinikeli ngokwabo.
Ikhaya lokuthatha umhlalaphansi eliphatha zonke izivakashi kungathi ziwumndeni
Isimenywa sizolandelwa kikho koke e Indawo yokuhlala Yomphakathi Iphupho lababamkhulu. Zonke izidingo nezidingo ezithile ze asebekhulile indawo yokuhlala lapha izothola ukunakwa okuqondile okuvela kubo bobabili abasebenzi kanye nabahlanganyeli bezokwelapha bangaphandle. Noma kusuka endaweni yokubuka yokudla, asebekhulile baphathwa ngiyabonga ikhishi langaphakathi waya ikhaya lokuthatha umhlalaphansi futhi at Ukudla okwenzelwe wena, yenzelwe labo abaphethwe yi-allergies, ukungabekezeleli kanye nezidingo ezithile zokudla. Isakhiwo futhi sinikeza ukuthi kungenzeka ukuhlala kwamasonto onke.
Indawo yokuhlala yabantu abadala ePalermo - Imisebenzi eyengeziwe nosizo oluqhubekayo lwabantu abakhubazekile nabakhubazekile
At Indawo Yokuhlala Yabantu Abadala, izivakashi zingathembela ekusizeni nasekubhekisiseni okuqhubekayo amahora angama-24 ku-24. Ngaphezu kwalokho, ukwenza ukuhlala kwabo kujabulise ngokwengeziwe, kungenzeka ukuthi kunamanye amasevisi amaningi esiceliwe, njengokuhamba okhethekile noma imisebenzi yokuzijabulisa namasiko. Yiba abantu abazenele o Ikhutshaziwe ukuhlala kwazo zonke izivakashi kuzokwenziwa kube mnandi kakhulu nganoma yisiphi isikhathi sosuku.
Ikheli: UVia Giovanni Campolo, 20
Umakhala ekhukhwini: 392 0652649
Ikhodi yentela: I-SPNSNO78P59G273W